Nnyocha: Ogologo Ndepụta Email bụ Ihe kachasị mkpa maka ndị na-ere B2B | Martech Zone
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa B2B maara ịre ahịa email nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị arụ ọrụ ọfụma, na nyocha sitere n'aka Direct Marketing Association (DMA) na-egosi ROI nke $ 38 maka $ 1 ọ bụla emefuru. Mana obi abụọ adịghị ya na ịmejuputa mkpọsa email na-aga nke ọma nwere ike ịnwe nsogbu ya.
Iji ghọtakwuo ihe ịma aka ndị na-ere ahịa na-eche ihu, ndị na-eweta software na-ere ahịa email Delivra soro Ascend2 soro mee nyocha n'etiti ndi mmadu a. Nsonaazụ a gụnyere na akụkọ ọhụrụ akpọrọ, B2B Email Ndepụta Atụmatụ, nke na-enye nghọta n'ime ihe mgbochi kachasị dị mkpa maka ịmepụta ndepụta email ka mma, yana otu ndị ahịa ahịa si emeri ha.
Ihe kachasị mkpa maka pasent 70 nke ndị a nyochara na-abawanye ogo nke ndepụta email ha. Nkwupụta ahụ na-atụ aro ọtụtụ ndị na-ere ahịa B2B n'ezie na-emezu ebumnuche ahụ, yana pasent 43 na-ekwu na ogo ndepụta email na-arịwanye elu, na naanị 15 pasent na-enwe mbelata na ogo. Pasent iri anọ na abụọ na-ekwu na ogo ndepụta ha anaghị agbanwe agbanwe.
Ezie na ịnọgide na-enwe a dị ọcha, emelitere atụ ụtụ magazin ndepụta nwere ike iyi ka ọ bụ isi, ọ bụ na-amalite ebe niile irè email ahịa mkpọsa. Mgbe ị na-ezipụ ozi ịntanetị, ndị na-ere ahịa ekwesịghị inwe obi abụọ ọ bụla na izipụ ozi ha nke ọma na igbe nnata ndị nnata ma lekwasịrị ndị debanyere aha ha anya. Neil Berman, onye isi oche nke Delivra
Yabụ ọ bụrụ na ọ dị ka ihe bụ isi, gịnị kpatara ndị na - ere ahịa ji esiri ya ike ịmepụta ma ọ bụ mekwaa ndepụta aha? Edepụtara enweghị atụmatụ dị irè dị ka ihe mgbochi kachasị dị mkpa (pasent 51), na-esochi usoro adịghị ọcha ndepụta zuru oke (pasent 39), yana ezughị oke ndepụta nke ndepụta (pasent 37). Naanị pasent isii nke ndị na-ere ahịa nyochara tụlee atụmatụ ndepụta email ha "nwere ihe ịga nke ọma" na-emeri ihe mgbochi ndị a ma nweta ebumnuche, ebe 54 pasent na-edozi maka "ọganiihu ịga nke ọma," na pasent 40 na-ewere onwe ha dị ka "enweghị isi."
Nchọpụta ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ịbawanye ndepụta email, n'agbanyeghị ogo, abụghịzi ihe kachasị mkpa, mana usoro ndepụta email na-aga n'ihu na-eme ka mmụba nke ndepụta email maka pasent 54 nke ụlọ ọrụ. Threezọ atọ kachasị dị irè gụnyere:
Ndebanye nbudata ọdịnaya (pasent 59)
Email-kpọmkwem ọdịda peeji nke (pasent 52)
Njikọ ịntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta (pasent 38)
Ihe nyocha ndi ozo gunyere
Mgbe ị na-eme atụmatụ ndepụta email, ijikọ email na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ụzọ kachasị sie ike (pasent 38), na-esote offline / in-store / call center opt-ins (28 pasent), na peeji nke ọdịda kpọmkwem (26 percent) .
Pasent iri ise na itoolu nke ndị na-ere ahịa B2B kwuru na mmụba nke ọnụego ntụgharị bụkwa ihe mgbaru ọsọ dị mkpa.
Pasent iri ise na otu ụlọ ọrụ nyochara na mpụga nke akụkụ niile nke usoro ndepụta email ha.
Delivra, na mmekorita ya na Iwu 2, weputara nyocha a ma nweta nzaghachi site na 245 B2B ahịa na ndị ọkachamara na-ere ahịa na-anọchite anya ụlọ ọrụ 123.
Budata Delivra's B2B Email List Strategy Report
Tags: b2bemail b2bb2b email ndepụtab2b ozindepụta email
Atụmatụ 7 iji wulite igwe na-eto eto na-aga nke ọma